Home > safarka Europe > top 5 Best Saffarada Day From Brussels
Ghent waa on our 5 safarada maalin Best liiska Brussels, sababtoo ah waxaa lagu yaqaan in ay mid ka mid ah Belgium khasnadihii Dr Makumbe iyo qiimaha dhaqanka, kuwaas oo; music, tiyaatarka, film, iyo muuqaallo. Sidoo kale waa super u dhow Brussels, ku yaal oo kaliya 60 kiiloomitir Brussels iyo si fudud loo gaari karo tareen.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee loo samayn in this magaalada Dr Makumbe soo jiidasho badan yahay si ay u sahamiyaan by cagta, si ay u qabsadaan bidhaamaysa ay naqshadaha Dr Makumbe cajiib ah, iyo sidoo kale in ay dareemaan in ay jawi firfircoon.
mahad The Sujuud Wanka dhuur ee by walaalaha Van Eyck ku yaalla gudaha Saint Bavo Cathedral. Booqo Belfry of Ghent, Hall Town ee, oo ka heli dhaw in ay taariikhda ganacsiga magaalada ee Old Fish Market.
Amsterdam waxaa badanaa loo yaqaan ee ay oo xiiso leh kafateeriyada! (Haddii aad ogtahay waxa aan ula jeedo!) laakiin, ma ha in aad Doqon. Amsterdam waa mid ka mid ah Best 5 safarada maalin Best ka Brussels maxaa yeelay waxa ay sidoo kale waa abaabulan lagu taariikhda, dhaqanka, iyo fanka.
Aad ula xiriiri lahayd ee la soo dhaafay ee Anne Frank House, wax ka bartaan farshaxanka at Rijksmuseum ah, Van Gogh oo Rembrandt House matxafyada, oo wuxuu ku raaxaysan caanka Heineken Experience. safra qarka kiraysan kartaa baaskiil iyo sahamiyaan jidadka, durkiya taariikhi ah, iyo masraxyada weyn ee Amsterdam. Dhanka, romantics yeelan karaan a-aragnimo u gaar ah Amsterdam halka riyaaqayaa ah nasto doon kortaan.
Waxa kaliya qaadataa 2.5 saacadood ka Brussels oo ay halkaas ka heli. waxaad Marka bood off tareenka, jiheysan caasimadda ah ee Duchy Grand oo ay bilaabaan in aad safar la sahaminta quarter Kirchberg iyo dhismayaal badan oo muhiim ah sida Maxkamada Yurubiyaanka ee Justice, iyo Guddiga Yurub. Yaabsan Dame Notre ee Cathedral, durkin in dhammaataan isku daraa naqshadaha dabayaaqadii Gothic la quruxdeeda Renaissance. Continue la wareegaya agagaarka jidadka soo jiidasho. Ha ka maqnaan qaadaan bidhaamaysa ah Palace ee Duke Grand iyo qalcad ah magaalada.
Like magaalooyin badan Belgian, square suuqa ku jira soo diyaariyeen cajiib ah naqshadaha. Tani waxay sidoo kale waa sababta oo ah wax badan oo ka mid ah hadhaagii naqshadaha Dr Makumbe ayaa la soo celiyay. On qoraal faraxsanaan, haddii aad tahay foodie a, markaas aad ku raaxaysan doonaa cunnada dhaqanka Vlaamse iyo dabcan, biirka.
Diyaar si ay u sahamiyaan ka baxsan Brussels? Haa? Save A tareenka halkaas waxaad ka heli kartaa, oo aan ajuurada maqan iyo geedi jaale siman oo aan xuduud lahayn. Easy!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Maalinta Easy From Milan By Tareen safarada” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-from-brussels/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
bruges Brussels Daytrips Ghent Luxembourg Talooyin safarka tareenka safarka traveltips